Nohamafisin’i Hong Kong ny lalàna mifehy ny fiainana manokana hanoherana ny “doxxing” · Global Voices teny Malagasy
Doxxing , miparitaka sy lasa rano fisotron'ireo mpihetsiketsika mpomba ny governemanta
Voadika ny 29 Jona 2021 17:14 GMT
Fanamarihana avy amin'ny mpandika: ny doxxing dia fitadiavana, ary avy eo fanelezana ny fiainan'olona manokana ety anaty aterineto
Pikantsary avy amin'ny “Hkleaks”, tranonkala fanaovana doxxing mpomba ny governemanta
Ato ho ato i Hong Kong dia mety hitondra andiana fanavaozana amin'ilay didim-pitondrana momba ny Angondrakitra Manokana mba hiatrehana ny “doxxing“, famoahana ety anaty aterineto ny torohay famantarana manokana ny olona, entina hanimbàna azy.
Ny “doxxing” dia heloka bevava araka ny Didim-pitondrana momba ny Fiainana Manokana manankery amin'izao fotoana izao, saingy tany aloha, ny Kaomisera mpiaro ny Fiainana Manokana dia niatrika fahasahiranana tamin'ny fitsongoana dia ny loharanon'ireo votoaty niharan'ny “doxxing” na hanamarinana raha toa ka tsy nahazoana fanekena ireo torohay nozaraina. Tsy nananany ihany koa ny fahefana araka ny lalàna mba hanerena ireo sehatra hanaisotra ireo votoaty niharan'ny “doxxing”.
Naroso teo anatrehan'ny Filankevitra Mpanao Lalàna (Legco) tamin'ny 17 May, hitarin'ilay volavolan-dalàna ho hatrany amin'ny angondrakitra momba ireo mpikambana ao anatin'ny ankohonana mivantan'ireo olona voakasik'izany ny fiarovana, ary homeny fahefana ny Kaomisera Mpiaro ny Fiainana Manokana mba hampanao fanadihadiana mahakasika heloka bevava, hametraka fanenjehana, handefa fangatahana mivantana mba hamafàna votoaty any amin'ireo sehatra — tsy mila maka didy avy amin'ny fitsaràna, mampihatra fanapahankevitra mifandraika amin'izay votoaty tratry ny doxxing, ary mety hisakana ireo tranonkala vahiny raha toa izy ireny tsy manaraka ireo torolàlana momba ny fanesorana votoaty.
Voalazan'ireo fanavaozana naroso ihany koa ireo sazy henjana kokoa ho an'ireo manatanteraka “doxxing” — fidirana am-ponja dimy taona no betsaka indrindra ary sazy ara-bola 1.000.000 dolara HK (eo amin'ny 128.765 dolara amerikàna). Na iza na iza, tafiditra amin'izany ireo mpiasa ao an-toerana miasa ho an'ireo tranonkala any ampitan-dranomasina, ary mety hisazy roa taona an-tranomaizina sy sazy ara-bola 100.000 dolara HK (eo amin'ny 12.976 doalra amerikàna), raha toa ireo sehatra ambany fiandraiketan-dry zareo na iasàny ka tsy mahavita manaraka ireo fangatahana hanesorana votoaty.
Niparitaka be ny “doxxing” ary lasa rano fisotro, na ho an'ireo mpanao hetsipanoherana, na ho an'ireo mpomba ny governemanta ao Hong Kong hatramin'ny Jona 2019 nipoahan'ireo hetsipanoherana fandàvana ny fanolorana olomeloka ho an'i Shina.
Satria ireo pôlisy mpandrava korontana tsy nahavita nampiseho ny karatra famantarana azy ireo nandritra ny hetsika nataony, valibontana nataon'ny sasany tamin'ireo mpikatroka mpandàla ny demaokrasia ny fanangonana sy fanelezana saripika misy an'ireo manamboninahitry ny pôlisy hita nampiasa herisetra tafahoatra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Tafaboraka ihany koa ny mombamomba ireo manamboninahitra sasany ao amin'ny pôlisy, ary niharan'ny sotasota teny anivon'ny fiarahamonina ny mpikambana ao anatin'ny ankohonany.
Ho setriny, tamin'ny Oktôbra 2019 dia nisy fanapahankevitra noraisin'ny sekreteran'ny fitsaràna sy ny kaomiseran'ny pôlisy nandrara ny olontsotra, na iza na iza, tsy hahazo manao ampamoaka ny angondrakitra manokan'ireo pôlisy sy ny ankohonan-dry zareo, raha toa ka ho entina handemena azy ireo no tanjon'izany.
Etsy andaniny, ireo manampahefana ao Beijing sy Hong Kong dia niantso imasom-bahoaka ny hanabaribariana ireo mpampianatra raha toa zareo ireny any an-dakilasy ka maneho fanohanana an'ireo hetsipanoherana. Niantso ihany koa izy ireo ny hanaovana “doxxing” an'ireo mpanao gazety miasa ho an'ireo trano fampahalalam-baovao mpandàla ny demaokrasia sy ireo mpiasan'ny fahasalamana nandray anjara tamin'ireo fitokonana (ohatra, ireo mpiasan'ny fahasalamàna nanao fitokonana iray tany am-piandohan'ny 2020 nitakiana ny governemanta mba hanidy ny sisintanin'i Hong Kong).
Ahitàna failo miisa 3.434 misy torohay mahakasika fiainan'olona manokana ao amin'ny HKleaks, tranonkala mpanao “doxxing” sy mpomba ny governemanta, ahitàna saripika, laharana telefaona, imailaka, kaonty media sôsialy, ary biografian'ireo mpanao hetsipanoherana, mpanao gazety, mpampianatra, mpiasan'ny fahasalamana, mpanakanto, ankoatra ireo maro hafa. Mivezivezy any anatin'ireo fampiasa fandefasana hafatra sy ireo sehatra anaty media sôsialy io angondrakitra io.
Kanefa, kely hery tsy ampy hiarovana amin'ny fomba tsy mitanila sy tsy miangatra an'ireo olompirenena ny alika mpiambina ny fiainana manokana ao Hong Kong.
Teo anelanelan'ny Jona 2019 sy Aprily 2021, tranga “doxxing” niisa 5.700 no voarakitry ny kaomisera mpiaro ny fiainana manokana. Taratasy 297 no nosoratany ho ana tranonkala na sehatra 18 nitakiana tamin-dry zareo hamàfa rohy 5.905. Manodidina ny 70 isanjato amin'ireo fitakiana nataony no nahazoany vokatra.
Nefa noho ny tsy fahampian'ny fahefany hanao fanadihadiana, natolotry ny kaomisera mpiaro ny fiainana manokana ho an'ny pôlisy ny momba ireo tranga 1.460, izay nisamborana olona 17 noahiahiana tamin'izany fotoana izany. Hatreto aloha, roa no voaheloka tamin'ny fanaborahana angondrakitra momba ny fiainana manokan'ny olona nefa tsy nahazoany fanekena, ny iray tamin'ireo sy voasazy higadra roa taona noho ny nakàny ny torohay manokana momba ireo manamboninahitry ny pôlisy sy ny nandefasany an'izany tao amin'ny vondrona Telegram, araka ny antontan-taratasin'ny fifampiresahana napetraka tao amin'ny Legco.
Nisy tranga 60 fanampiny nalefan'ny kaomisera mpiaro ny fiainana manokana ho an'ny departemantan'ny fitsaràna, samy miresaka “doxxing” momba ny torohay mahakasika ireo manamboninahitry ny pôlisy sy ny fianakavian-dry zareo avokoa. Olona efatra no voaheloka.
Raha lany ilay tolodalàna, afaka ataon'ny kaomisera mpiaro ny fiainana manokana ny manao izy tenany ny fanadihadiana ireny tranga ireny, hatramin'ny fanaovana hetsika araka ny lalàna, tsy mandalo intsony amina rantsana hafa mampihatra lalàna.
Raha namaly ireo ahiahy naroson'ireo mpanao lalàna mpomba ny fitondràna, izay milaza fa tsy manaraka ny fitakiana ho fisintonana votoaty ireo sehatra ao amin'ny media sôsialy vahiny, dia nilaza i Erick Tsang, sekreteran'ny raharaha momba ny lalam-panorenana:
Mety hiharan'ny fisamborana ireo mpiasa avy ao Hong Kong mipetraka any ivelany raha toa ny mpampiasa azy ka tsy mahavita manaisotra ireo angondrakitra nanaovana “doxxing” tsy ho ao amin'ny sehatra iasàny, mifanaraka amin'ilay lalàna vaovao nasiam-panitsiana manameloka ireo famoahana torohay manokana momba ny olona kanefa ampiasaina amin-javatra tsy manjary… Betsaka amin'ireny sehatra any ivelany ireny no manana mpiasa na mpitantana ao Hong Kong. Azonay samborina ireny olona ireny. Heveriko fa mety haneho fiarahamiasa amin'ireny fampilazàna ireny ihany ry zareo.
Nilaza ihany koa Alice Chung, kaomisera mpiaro ny fiainana manokana, fa ireo fanitsiana natolotra dia misy andalana mandrara manontolo ny tranonkala raha toa izy ireny ka natokana fotsiny ho fampiantranoana torohay fanaovana “doxxing”.
Araka ny lalàna momba ny fiarovam-pirenena dia ananan'ny pôlisy fahefana ny mibahana ireo tranonkala vahiny, tsy mila milaza amin'ny daholobe. Ny tranga voalohany voamarina dia tamin'ny Janoary 2021: ny fivezivezena ao amin'ny HKChronicles.com, tranonkala iray mpanohitra ny governemanta izay nampiantrano ireo torohay momba ireo manamboninahitry ny pôlisy tratry ny fanaovana “doxxing”, dia nobahanan'ny Hong Kong Broadband Network, mpanome tolotra aterineto, taorian'ny naharaisany didy fisintonana avy amin'ny pôlisy.
Mandritra izany anefa dia mbola hita ety anaty tambajotra foana ilay tranonkala mpanao “doxxing” sady mpomba ny governemanta.
Raha lany ilay lalàna, ho hita eo raha toa hampihatra tsy misy fiangarana azy io ny Kaomisera mpiaro ny Fiainana Manokana, handray an-tànana ny “doxxing” tsy ijerena izay (tena na heverina ho) fironana politikan'ilay iharany. Ho fitsapàna iray hafa io ho an'ny tany tàn-dalàna ao Hong Kong.